8 mitambo yemahara uye kunyorera kwenguva shoma paApp Store | IPhone nhau
Nhasi tichaenda kupa imwe ongororo yeaya asingachinjiki zvinopihwa izvo isu zvatinowanzo kuwana muApp Store, sarudzo pamwe 8 yemahara mitambo uye maapplication eApple uye iPad izvo zvinowanzobhadharwa.
Ini ndinokuraira iwe kuti utore mukana uye uzvitorere zvese nekukurumidza sezvazvinogona; ipapo uchave uine nguva yekuziva kana uchivada kana kwete, kana uchivada kana kwete, chakakosha chinhu kutora mukana wekupihwa. Rangarira izvo Aya maapplication nemitambo mahara izvozvi, asi isu hatizive kuti zvichareba sei, saka kurumidza uye unakirwe.
1 Compress Vhidhiyo - sununguka iyo Space
2 Backseat Mutyairi Wepasi Pose - Wikipedia uye Wikivoyage Nzvimbo dzeKufarira
3 GoodCounter - Yakanaka Yakanaka Tally Counter
4 Rogue nyeredzi
5 WorkBreaker - Yakagadzirwa Yakagadzirwa Pomodoro Timer neNhasi Widget
6 Musikk - Yemahara Music Kutenderera ye SoundCloud
7 Yakarasika muHarmony
8 Ruvara Minis Vana
Compress Vhidhiyo - sununguka iyo Space
Compress Vhidhiyo - sununguka iyo Space iko kushandiswa uko inodzvanya mavhidhiyo pane yako iPhone kana iPad kuti usunungure yakawanda nzvimbo pane chako kifaa. Zvakare, iwe unogona kuita batch kumanikidza uye kwayo kusimudzira zvirevo zvekuti iyo yekutanga mhando ichachengetedzwa.
Kamwe mavhidhiyo paanomanikidzwa, ivo vanochengetwa mufaira mune iyo app pachayo, asi iwe unogona zvakare kuendesa kune iwo Mapikicha app nemaoko.
Mutengo waro wenguva dzose uri € 2,99 asi ikozvino unogona kuuwana mahara.
Backseat Mutyairi Wepasi Pose - Wikipedia uye Wikivoyage Nzvimbo dzeKufarira
Wakambozvibvunza here kuti unokurumidza sei kukwira chitima, bhazi, mumotokari kana mutiraki? Kana kuti urikushamisika kuti wakakwira zvakadii uchidzika nemugwagwa wegomo? With Backseat Mutyairi unogona kutsvaga nekukurumidza uye kuziva nzvimbo dzekushanyira mune ramangwana.
Mutengo waro wenguva dzose uri € 0,99 asi ikozvino unogona kuuwana mahara.
GoodCounter - Yakanaka Yakanaka Tally Counter
Con GoodCounter unogona udza zvese zvaunofungidzira nenzira yakapusa: macalorie akatsva, daro akafamba, mabhuku akaverengwa, canary yero mota dzawaona ...
Rogue nyeredzi inovaraidza nzvimbo yehondo mutambo ye iPhone nePadad. Unogona here kurarama uri mupenyu zvakakwana kuti upone pirate system uye uve Ace muRogue Star?
WorkBreaker - Yakagadzirwa Yakagadzirwa Pomodoro Timer neNhasi Widget
WorkBreaker iri nyore, asi yakanaka timer iyo ichakubatsira iwe kuti uve unobudirira zvakanyanya. Zviratidzo zvaro zvikuru zvinosanganisira:
Nyore seta nguva dzezvikamu zvebasa, mabhureki, uye mabhureki marefu nemaitiro ekuvandudza, ari nyore kushandisa
Gamuchira zviziviso zvine ambient kurira mhedzisiro
Widget yanhasi inokubatsira iwe nekukurumidza kuwana ruzivo rwako rwakakosha kubva chero kupi
Yakanyanya kugadziriswa: wega seta iyo nguva yezvikamu zvebasa, mabhureki uye mabhureki marefu
Sarudza mushure mengani zvikamu zvebasa zvaunoda kutora zororo refu
WorkBreaker yakanakira iyo "pomodoro nzira" uye dzimwe nzira dzakafanana se "52-17 nzira" kana iyo "90 miniti nzira".
Musikk - Yemahara Music Kutenderera ye SoundCloud
Kana iwe uri wenguva dzose SounCloud mushandisi, Muzikk ndeye yakapusa uye inonzwisisika mutambi, iyo inobvumidza mushandisi kutarisa pamimhanzi, uye hapana chimwe chinhu. "Muzikk ndiyo yega inoridza mimhanzi inopa mukana wekuwana chete Soundcloud pasina muripo uye pasina kushambadzira."
Mutengo waro wenguva dzose uri € 4,99 asi ikozvino unogona kuuwana mahara.
Mutambo mumhanyi wemimhanzi mauri iwe unogona kuona mbiri mbiri dzinoshamisa:
Akaperekedzwa naMIRAI pakubhururuka kwake kuburikidza nepasi rese
Inokutendera iwe kuti utize ramangwana rako
Tsvaga mimhanzi inonakidza yevanyori vechiJapan
Anotanga rwendo runotyisa rwekubatsira kuponesa Kaito Aya.
Mutengo waro wenguva dzose uri € 3,99 asi ikozvino unogona kuuwana mahara.
Ruvara Minis Vana
RuvaraMinis Vana Ndicho nyore application kune vadiki vari mumba kunakirwa kudhirowa uye kupenda. "Rakafanana nebhuku re3D rekupenda asi riine mafomu chaiwo pachinzvimbo chepepa." Uye kana iwe uchinzwa nostalgic, iwe unogona zvakare kuve nenguva yakanaka yekupenda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Kutengesa » 8 yemahara mitambo uye maapplication kwenguva shoma paApp Store
Kuchinja bhatiri reAirPods kuchabhadhara makumi mana emaeuro